नयाँ रेल लाइन शुरू भएको छ, अजरबैजान कवर, टर्की, र Georgia. लाइन भन्दा समेट्छ 820 किलोमिटर र अतिरिक्त freights accommodates प्यासेन्जर. पहिले, लाइन रूस बाइपास हुँदासम्म युरोप र चीन जडान गर्न पहिलो हुनेछ. ट्रेन अजरबैजानको राजधानी बाकू र जर्जियाली राजधानी तिब्लिसी देखि टर्लीको कार्स शहरमा अपरेट हुनेछ।. यसबाहेक, यो कम गर्नेछ यात्रा समय युरोपियन रेलमार्ग पूर्वाधार र बीच चीन रेल. अजरबैजान को राष्ट्रपतिहरु, टर्की, र Georgia, साथै युरोपेली संघ प्रतिनिधिहरु, नयाँ रेल लाइन खोल्ने उपस्थित.
पहिले, रेल लाइन मूल मा सुरु गर्ने योजना बनाए थियो 2010 र त्यसपछि भित्र 2012. तथापि, कारण लाइन आर्मेनिया मार्फत पारित होइन, अमेरिकी र यूरोपीय संघ दुवै आर्थिक योगदान थिएन र यो ढिलाइ कारण. साथै, रेखा ती देशहरू हुँदै जान्छ जुन अघि उनीहरूको थियो सीमाना आपसमा बन्द (को फिर्ता डेटिङ सोभियत संघ).
दोश्रो, रेखा जसलाई नाम दिइएको छ 'यूरेशियन पुल', यसलाई माध्यम बित्दै देशहरुमा को अर्थव्यवस्था जडान हुनेछ. चिनियाँ सामान चीन देखि युरोप रूपमा सानो यो लाइन मा ओसारपसार गर्दै 12 दिन. यसबाहेक, को रेल ओसारपसार हुनेछ5गर्न सरल अपेक्षा यो नम्बर प्रति वर्ष कार्गो को लाख टन 17 समय लाख. यसबाहेक, यो को पोर्ट गर्नेछ उपकरण अजरबैजान को मा सबै भन्दा ठूलो मा कैस्पियन सागर क्षेत्र.
काजाकिस्तान अब आफै नयाँ 'सिल्क रोड रूपमा स्थापित गरेको छ’ यो युरोप र बीच बढेको फ्रेट गतिविधि संग चीन. ऐतिहासिक काजाकिस्तान युरोप को लागि एक जडान राज्य सेवा, एशिया, र भारत. काजाकिस्तानको भाडा गतिविधि रिजर्भेन्ट भएको कारण यो हो कि यसले यूरोपको एसियाको दूरी काट्छ 10,000 किलोमिटर. यसबाहेक, काजाकिस्तान भन्दा खर्च भएको छ $3 यसको रेलवे लाइनमा अर्ब. यो समावेश $250 मा लाख खर्च भयो Khorgos गेटवे. यो गेटवेले चिनियाँ ट्रेनहरूलाई लाइनहरू परिवर्तन गर्न नदिन को उपयोग गरेर युरोपियन रेलहरूमा उनीहरूको सामानहरू हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ.
नयाँ रेल लाईनको बारेमा उद्धरणहरू
तपाईं यहाँ पहिले नै भएकोले, किन लिन3मिनेट आफ्नो अर्को यात्रा को लागि सबै भन्दा राम्रो रेल टिकट पाउन? तिमी जहाँ भएपनि युरोप मा यात्रा गर्न योजना हामी तपाईंलाई टिकट पाउन मदत गर्न सक्छ. चाहे तपाईं को आल्प्स हेर्न देख रहे स्विट्जरल्याण्ड र इटाली वा सायद जस्तै देशहरूको भ्रमण गर्नुहोस् बेल्जियम र हंगेरी हामी तपाईंलाई ढाकिएको भयो. तपाईंको रेल टिकट बुक अब. सबै भन्दा ज्ञात भुक्तानी विधिहरू प्रयोग टिकट भुक्तानी
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnew-train-links-asia-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#एशिया #asiaeurope #raillink यूरोपेन्ट्रावेल रेल यात्रा